Ngwongwo eze eji eme ihe, Ngwunye eze - Vayu
Ọgwụ Nkụzi eze
Nchịkọta eze eze
Usoro Nkuzi Dijitalụ
Nhọrọ & ngwa
igwefoto onu intra
Ebe obibi ezé
Compressor na draya
Compressor na igbe mkpọchi
Igwe ọkụ x panoramic
Ihe mmetụta ntanetị
Ihe nhicha nke Ultrasonic
Iho mmanu Machine
Sinter-diamond & Acryli Polisher
Nhicha & Nkume Nkume
Mmepụta R & D.
Na-enye otu Ngwọta-Ngwọta mgbe niile ga-aga
ndị ahịa niile.
Ozi ndi ozoGaa
SHANGHAI JPS Dental CO., LTD e kpọbata eze na ngwaahịa na ahịa si karịa mba 80 na mpaghara. Anyị isi eze na ngwaahịa ndị eze na ngwá dị ka eze ịme anwansị, oche ndokwasa eze unit, obere eze unit, mmanụ free Compressor na autoclave, wdg. Na eze disposables dị ka ịkụbanye kit, eze bib, crepe akwụkwọ, wdg
Anyị CE na ISO13485 e nyere site TUV, Germany.
Azụmaahịa Gị A pụrụ ịtụkwasị obi Onye Mmekọ NA CHINA
Eze oche oche JPSF600
Mmanụ na-enweghị ikuku ikuku
anyị nye ndụmọdụ ịhọrọ
JPS Dental na-enye ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ya na Ngwọta Otu Kwụsị maka ndị ahịa niile.
Na-eru nso afọ 20 na eze na ahụ ike azụmahịa
ISO 13485 kwadoro na ihe karịrị 60 ngwaahịa nwere OA
Ọgaranya nwere na gọọmentị
Otu Kwụsị ngwọta maka zuru ịzụta
kacha ọhụrụ ikpe ọmụmụ
JPS Dọkịta Simulator
Qualitykụzi Ọgwụ Dental High Dental Maka Dental Training
Ndị ahịa Britain kwuru, sị:
JPS Group, ndi ahia anyi tukwasiri obi maka inye onyinye. Obi dị anyị ụtọ na ogo nke ọrụ gị ma nwee ekele maka nzaghachi JPS na ọkachamara na azụmaahịa. JPS bu ihe kwesiri ntukwasi obi na ekele nke a, anyi jisiri ike mee ka ndi ahia anyi juo. Anyị ga-atụ anya mmekọrịta mmekọrịta azụmahịa kachasị mma.
Ndị ahịa Sweden kwuru, sị:
N’etiti ntiwapụ nke nje na-efe efe, nkụda mmụọ na ụjọ jidere mba niile n’ihi ụkọ akụrụngwa nchekwa onwe onye. JPS gbagoro wee nye ya nkenke na ogo. N'oge ihe yiri ka ọ gaghị ekwe omume, JPS mere ka ọ kwe omume. Maka anyị JPS bụ onye anyị na ya ga - ebi ndụ!
Kemgbe ntọala ya 11 afọ gara aga, JPS Dental etinyewo aka n'inye ndị ahịa otu nkwụsị Ngwọta nke ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ya bụ ndị nwetaworo aha ọma na ụlọ ọrụ eze ma nwee ntụkwasị obi bara uru n'aka ndị ahịa gburugburu ụwa.
JPS Group na-enye ngwaahịa ndi kwesiri ntukwasi obi na Ngwọta Otu Kwụsị maka ndị ahịa niile.
C1506, Nke 519, Qifan Rd, Pudong, Shanghai, China. 200137
Right Copyright - 2021JPS: All Rights echekwabara.